Caafimaadka: 36 Faa’iido Oo Ku Lammaan Dadkuna Ka Helo Saliid Macsarada (Queen of Oils) | FooreNews
Home Aragtida Dadweynaha Caafimaadka: 36 Faa’iido Oo Ku Lammaan Dadkuna Ka Helo Saliid Macsarada (Queen of Oils)
Caafimaadka: 36 Faa’iido Oo Ku Lammaan Dadkuna Ka Helo Saliid Macsarada (Queen of Oils)
FoorenewsJun 21, 2015Aragtida Dadweynaha, Barnaamijo, wararka0
Qormadeena caafimaadka waxa aan ku eegi doonaa Faa’iidooyinka Caafimaad ee laga helo Saliid Macsarta oo khubarada caafimaadku muddo horeba ogaadeen faa’iidada ay u leedahay Caafimaadka qofka. Qormadan ayaa ku soo beegmaysa wakhti shacabka reer Somaliland dhibaato weyn oo dhinaca Caafimaadka ahi ka haysato Saliidaha kala duwan ee dalka loo iib keeno ee laga soo dhoofiyo inta badan dalalka Asia. Noocyada Saliidaha dalka la keeno ayaa la isku raacay in ay yihiin kuwo aad u tayo xun oo dadka ku haya dhibaatooyin caafimaad oo aad u badan sababna u noqday xanuuno kala duwan oo bulshada aan hore ugu badnaan jirin sidaa darteed waxa loo baahan yahay in aan ka faa’iidaysanno saliidaha kale ee dalkeena laga heli karo ee caafimaadka u wanaagsan sida Saliidda Macsarta, oo aan halkan ku soo gudbin doono ugu yaraan 36 Faa’iido oo la xaqiijiyey in laga heli karo Saliid Macsarada.
Macsaradu waa saliid aad u qaali ah lehne faa’iidooyin caafimaad oo aan la soo koobi karin. Saliid Macsarada waxaa la isticmaali jiray kumannaan sano ka hor oo Hindida iyo Shiinayska ayaa u isticmaali jiray daawo lagu daaweeyo cudurro badan waxaana loo yaqaannaa Saliid macsarada “Queen of Oils” oo ah macnaheedu “Boqoraddii Saliidaha” waxayna magacaas ku mutaysatay qiimaheeda caafimaad iyo cunnno ahaanteedaba.
Saliid Macsarada inta badan dadkeenu aad uma yaqaanaan Faa’iidada ku jirta waxaana aad looga Isticmaalaa wadanka Soomaaliya ee n Jaarka nahay waxaadse mooddaa in muddooyinkan dambe shacabka reer Somaliland u sii dhawaanayaan in ay bartaan isticmaalkeeda iyada oo aad arkayso qoysas badan oo wax ku karsanaya iyo Huteelo wax ku kariya ama cuntada ku dara, iyada oo waddanka Soomaaliya ee aan jaarka nahay laga isticmaali jiray muddo fog iyadoo loo adeegsan jiray marka geedka ay ku jirto laga miirayo Geela.
Faa’iidooyinka Iyo Cudurrada Lagu Daaweeyo Saliid Macsarta:
Haddii Aan Isku Dayno In Aan Ka Hadallo Faa’iidooyinka Ugu Caansan Ee Ay Leedahay Iyo Cudurrada Lagu Daaweeyo Waxaa Ka Mid Ah:
1- Macsaradu waa saliid cunnada loo isticmaalo lehne caraf udgoon (Ur Udgoon).
2- Saliid Macsaradu waxay ka hortagtaa cudurka Kansarka maadaama ay tahay “Antioxidant” awood leh.
3- Waxaa Saliid Macsarada ku jira ugu yaraan 7 maaddo oo xanuun baabi’iye ah.
4- Macsarada waxaa lagu daaweeyaa diiqadda, werwerka iyo hurdo la’aanta.
5- Macsarada waxaa lagu daaweeyaa Cirridka iyo cudurrada ku dhaca Afka.
6- Macsaradu waxay daawo u tahay kolestaroolka kacsan (Dufanka dhiigga).
7- Macsaradu waxay joojisaa qolfoofidda xididada, waxayna furtaa xidada xinniban ee wadnaha.
8- Macsaradu waxay jilcisaa caloosha laguna daaweeyaa saxaro-adaydda (Calool Istaagga).
9- Macsaradu waxay daawo u tahay wareerka iyo aragtida daciifka ah.
10- Macsarada waxaa lagu daaweeyaa xasaasiyadda iyo cuncunka jidhka
11- Macsarada waxaa lagu daaweeyaa kacsanaanta iyo isku-buuqa maskaxda.
12- Macsaradu waxay nafaqo u tahay korriinka Timaha wayna dheereysaa.
13- Macsaradu waxay oogada ka ilaalisaa ileyska iyo kulaylka Qorraxda.
14- Macsaradu waxay daawo u tahay xanuunka caadada (Dhiigga Xaydka Ee Dumarka) iyadoo la mariyo caloosha qeybta xudunta ka hooseyso xilliga caadada.
15- Macsaradu waxay yaraysaa Qallaylka iyo xanuunka haweenka dhalmo-deyska ah iyadoo Xubinta Taranka lagu subko.
16- Waxaa saliid macsarada ku jira borotiinno aad u badan oo ku filnaan karo qofka haddii uu cunto ka dhigto.
17- Waxaa macsarada ku jira dufan kordhiya xasuusta iyo xifdiga (Wax qaybidda).
18- Waxaa macsarada ku jira fitamiinka “E” kaasoo firfircooni geliya wareegga dhiigga.
19- Waxaa kaloo macsarada ku jira Kaalsiyam, Botaasiyam iyo Fosfate oo jidhku aanu marnaba ka maarmin.
20- Macsaradu waxay u horreysaa saliidaha loo isticmaalo duugidda Jidhka, maadaama maqaarka jidhka ay si sahlan uga gudubto.
21- Macsaradu waxay daawo u tahay kacsi la’aanta iyo Hammo yarida (Doonista Galmada), maadaama macsarada laga helo 4 maaddo oo muhiim u ah kacsiga iyo badinta biyo-baxa.
22- Macsaradu waa daawada ugu fiican xanuunka loo yaqaanno “Sciatica” oo ah xanuun neerfaha ku dhaca “Sciatic” oo keena dhabar xanuun iyo lugo xanuun aad u daran.
23- Macsaradu waxay ka qeyb qaadataa kontoroollida cadaadiska dhiigga.
24- Macsaradu waxay daawo u tahay Baabasiirta, qofkii macsaro joogteeyana baabasiir isma arkaan waa sida la xaqiijiyay.
25- Macsaradu maaha saliidaha kiciya Gaaska ama lab-jeexa keeno (Laab-Dillaaca).
26- Saliidda macsaradu waxay raagi kartaa muddo dheer iyadoon isbadalin maadaama ay ku jirto maaddo la dagaallanta bakteeriyada iyo caabuqa.
27- Macsaradu waxay daawo u tahay caabuqa sanqada “Sinusitis” oo hal dhibic oo sanka lagu dhibciyo ayaa ku filan.
28- Macsarada oo lagu luqluqdo subax kastaa waxay ka hortagtaa caabuqa Qoomanka iyo Cuno-xanuunka.
29- Macsaradu waxay daawo loo bogay u tahay Xanuunada ku dhaca Is-goysyada Xubnaha.
30- Macsaraha waxaa lagu daaweeyaa cudurka “Athletes Foot” oo ah caabuq fangas ah oo ku dhaca faraha cagta dhexdooda oo ku badan Orodyahada iyo Ciyaartoyda.
31- Markii lala isticmaalo biyo kulul waxay daawo u tahay cabeebka farjiga ee dumarka.
32- Macsarada waxaa lagu daaweeyaa faruuruca ay keento xafaayadaha loo xidho caruurta.
33- Macsarada oo ilmaha iskuulka tagaya loo mariyo sanku waxay ka ilaalisaa hargabka, ifilada iyo sanboorka ay ka qaadi karaan caruurta kale.
34- Macsarada waxaa lagu daaweeyaa Sanboorka iyo madax xanuunka noocyadiisa kala duwan iyadoo madaxa inta la marsado lagu xidho.
35- Macsarada oo loo shito sida fooxa ama la isku huuriyo waxay daawo u tahay neefta iyo cabudhnaanta marinnada hawada.
36- Macsarada waxaan la siinin kaliya qofka shubmaya maadaama ay tahay calool jilciye oo waxay sii kordhineysaa shubanka.
Herb horn action
Previous PostFannaanad Da' Yar Oo Reer Somaliland Oo Ku Dhawaaqday In Ay Fankii Isaga Baxday Codsina Dadka U Gudbisay Next PostHaweeneydii Ninka Guursada Siineysay Guriga Iyo Gaadhiga Oo Ninkii Ay Xulatay La Dhuumatay